भारतमा जासुसी गरेको सरकारमाथि आरोप, नेपाली राजदूतको पनि हुँदै थियो फोन ट्यापिङ ? - National Live TV
भारतमा जासुसी गरेको सरकारमाथि आरोप, नेपाली राजदूतको पनि हुँदै थियो फोन ट्यापिङ ?
नयाँ दिल्ली, 20 जुलाई 2021
भारतमा 50 हजार बढि व्यक्ति र संस्थानहरुको मोबाईल फोन ट्यापिङ गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै भारतका लागि नेपाली राजदूतको पनि निगरानी भइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन । इजरायलको एक कम्पनीले निर्माण गरेको पेगासस जासुसी सफ्टवेयर मार्फत विभिन्न मुलुकका ५० हजार बढी फोन प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिएको विषयले भारतमा राजनीति तातेको छ । सरकारले गोपनियताको उल्लंघन गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले सरकारको विरोध गरिरहेका बेला भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपाली राजदूतसहित चीन र पाकिस्तानका कूटनीतिक कर्मचारीहरुको पनि फोन ट्यापिङ भएको बताएका छन ।
तर भारत सरकारले भने आफुहरुले कुनै पनि व्यक्तिको जासूसी नगरेको स्पष्टिकरण दिएको छ । सोमबार लोकसभामा लिखित जवाफ पेश गर्दै संचार मन्त्री अश्विनी वैश्णवले पेगासस सफ्टवेयरबाट कसैको पनि फोन ट्याप गरिएको भन्ने अहिले सम्म पुष्टि नभएको बताएका छन । मन्त्री वैष्णवले भने सरकारले हरेक नागरिकको गोपनियतालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै सासंदहरुलाई यस मुद्धामा छानविन गरि निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका छन।
भारतमा अहिले पेगासस सफ्टवेयरमार्फत विपक्षी राजनीतिक दल, पत्रकार र आलोचकको निगरानी गरी महत्वपूर्ण सूचनाहरु हात पारेको विषय चर्किएको छ । यस विषयमा चासो व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले एक विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेको छ ।
यो पेगासस सफ्टवेयरमार्फत कुनै पनि देशका खुफिया र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले टाढाबाट नै मोवाइलमा रहेका विवरण प्राप्त गर्न सकने बताइएको छ । सो सफ्टवेयरको विकास इजरायलको खुफिया एजेन्सीले सन् २०१० मा गरेको हो । सो पेगासस सफ्टवेयरमा फोनको क्यामरा र माइक्रोफोनलाई समेत सक्रिय बनाउने क्षमता भएको भनिएको छ ।